musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Kuchengetwa kwezuva nezuva mumahotera kwakafa zvechokwadi here?
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Maindasitiri anoongorora isu ataona anoratidza kuti shanduko dzekuchengetera dzimba dzinogona kutungamira kune zana- kusvika ku100-hwaro-hwenongedzo uye iyo inogona kukanganisa mashandiro emahotera. Nekudaro, kushomeka kwevashandi uye vekuwedzera kudzidzisa vachengeti vemba vanoda izvozvi mushure mekusachenesa makamuri yenguva yese iyi kuri kudzivirira huwandu hwezvigadzirwa kubva kumusoro.
Mahotera mazhinji akamanikidzwa kucheka masevhisi panguva yedenda.
Kumiswa kwekuchengetwa kwezuva nezuva kwaive imwe yesarudzo dzemahotera mazhinji.
Hilton aive mumwe wekutanga kubuda aine chimiro chakarongeka pakuchengetwa kwemba.
Mahotera akarwira kuti arambe akamira mu2020: kungotyora nyangwe kwaionekwa senge kukuru. Kuti zviite kudaro, mahotera mazhinji akamanikidzwa nebasa risinganakidze - kunyangwe hazvo richidikanwa - rekurova masevhisi pavaigona.
Chimwe chezvinyanya kushamisa chaive uye chiri kuramba chiri kumiswa kwekuchengetwa kwezuva nezuva kumahotera mazhinji. Iyo sevhisi, yakambotorwa seyakareruka nevashanyi, yakava yeku-kukumbira kuendeswa uye kazhinji haina kupihwa kusvika mazuva mazhinji mushure mekupinda.
Hilton anga ari wekutanga kubuda aine chimiro chekuchengetwa kwemba, asi mabrands mazhinji akatevera, kungave kutaura kudaro munzvimbo yeruzhinji kana kuzivisa vatengi pavanopinda. Chiyero ichi yaive zano rekudzora vashanyi nevashandi pakurwisa COVID -19, asi iyo, zvakare, yaionekwa semuponesi wemari, ichidzikisira maawa ekuchengetedza
Vamwe vanoti danho rekukumbira-kuchengetedza dzimba nderimwe mune zvingangove kupunzika kwemasevhisi uye zvinowanikwapo kusunungura, zvakafanana nemashandiro anoita ndege, uko kune mutengo wakasungirirwa kune zvakasiyana zvinhu zvaimbove zvekurumbidza.
Iko kuchinja kune chaiko kunokanganisa pamutsara wepasi-kuchengetedza mari uye kuwedzera purofiti? Icharamba ichienderera sezvo mabasa achisimuka? Chii vanofunga vaenzi?
Kufanana nezvakawanda zvinhu zveindastiri indasitiri, nyaya yacho yakanyanya kuomarara kupfuura zvingafungidzwe pakutanga kuona.